Ogaden News Agency (ONA) – Shacabka Somaliyeed oo Maalgalintay Diideen Qurbajoogta Itobiya La Doonayo in Laga Urursado
Shacabka Somaliyeed oo Maalgalintay Diideen Qurbajoogta Itobiya La Doonayo in Laga Urursado
Waxay safarada Itoobiya ee UK London qaybinaysaa waraaqo caasumad ah oo lagu caasumayo inay safaaradda Yimaadaan Bishan gudaheeda.
Caasumaddaas oo ujeeddadeedu tahay in shacabka Somaliyeed lagu baado oo laga qaado sidii caadada ahayd lacagtii lagu dhisi lahaa Biya-xireenka Wabiga Nile lagu goynayo. Lacagtaas waxaa laga qaadayaa xawaaladaha, TVyada Somalida, ganacasatada waawayn, maamul-goboleedyada Somalia, Siyaasiyiinta Somalia ee Caanka ah ee doonayaa inay Itoobiya u magacowdo jago Dowladda Somaiyeed ah iwm. Waxaa kaloo laga qaadi dhammaan dabaqoodhiga iyo kaalkaaliyeyaashooda.
Waxaa qabqable u ah mashruucaas lacagta lagaga ururinayo dadka Somalida ah nin la yidhaado Khadar Koodbuur oo London u fadhiya xawaaladda Dahab-shiil. Inkastoo uu ninkaas sheegto inuu hadda xawaaladaas shaqo ku lahayn , hadda waxaan la soconaa inuu wakiilka rasmiga ah yahay.
Ninkan waxaad sawiradiisa ka helaysaan websitekan. Hoosna waan idiinku soo lifaaqnay.
Waxaa mudan in halkan lagu xuso inay qurbajoogta Itobiyaanka ee ku nool dalalka reer galbeedka ay diideen inay bixiyaan lacagtan, ka dib markii la ogaaday inuu yahay mashruucan mid faashil ah oo khasaarihiisa uu ka badan yahay faa’iidada laga helayo. Iyadoo waliba uu dhib aad u badan uu kasoo gaadhayo labada shacab ee Sudan iyo Masar.